Best sakafo hohanina eo amin'ny fiaran-dalamby amin'izao fotoana izao raha ny marina dia tena matsiro. Satria maro ny fiarandalamby manolotra 5-kintana sy ny zavatra ilaina kilasy voalohany sakafo. Anisan'izany ny sakafo atao amin'ny izao tontolo izao malaza chefs. Angamba ianao zatra mamaky mikasika ny mahagaga sakafo in gara na tsara tarehy toerana manodidina hitanao ao amin'ny fiaran-dalamby dia. Noho izany dia mety hahagaga anao fa ny sakafo azonao hohanina amin'ny lamasinina dia tsara tarehy mitovy.
No tianao mba hiraketana ny lahatsoratra bilaogy amin'ny toerana, dia tsindrio eto: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-meals-trains%2F%3Flang%3Dmg - (Ampidino nidina hamangy ny Embed Code)